द लर्ड अफ द रिङ्ग्स - विकिपिडिया
वो शैतानी औंठी : एक कलाकारको छवि
द लर्ड अफ द रिङ्ग्स' (en:The Lord of the Rings, मतलब औंठिहरूको मालिक' ) अङ्ग्रेजीमा रचित एक उपन्यास हो जसको (ब्रिटिश) लेखक जे. आर. आर. टोल्किन हुन। यो उपन्यास खासमा तीन किताबहरूको सिलसिला हो , जुन स्वयंको टोल्किनको एक पछिल्लो कार्य द हबिटको एक कडी जस्त‍ै छ। यि उपन्यासहरूको २००१, २००२ र २००३मा तीन हलिवुड फिल्महरूमा फिल्मांकन भएको थियो, जसको निर्देशक पीटर ज्याक्सन हुन। तीनौं फिलिमहरू हलिवुडमा धूम-धामसँग हिट भए र यिनले धेरै ओस्कार पुरस्कार पनि जिते। यस उपन्यासको कथा काल्पनिक छ।
Spoiler चेतावनी:कथानक र / या अन्त को विवरण तल दिइएको छ
१ मध्य धर्ती
२ शैतानी औंठी
३ उपन्यासको कथा
३.१ पहिलो कडी : द लर्ड अफ द रिङ्ग्स--द फेलोशिप अफ द रिंग
३.२ दोस्रो कडी : द लर्ड अफ द रिङ्ग्स--द टू टावर्स
३.३ तेस्रो कडी : द लर्ड अफ द रिङ्ग्स--द रिटर्न अफ द किंग
मध्य धर्ती[सम्पादन गर्ने]
मध्य धर्ती (en:Middle Earth) यस उपन्यासमा जताइएको एक काल्पनिक महाद्वीप हो जुन चारै तिरबाट समुद्रले घेरिएको हुन्छ। यसको पश्चिममा एउटा अर्को महाद्वीप छ, जसको नाम वालिनोर (en:valinor) हो। वालिनोर देवताहरूको भूमि हो जहाँ मान्छे जान सक्दैनन्।
कथा शुरू हुन्छ मध्य धर्तीमा तर शैतान कालो राक्षस बाट, जसको नाम थियो सौरन (en:Sauron) र जुन कालो जादूमा माहिर थियो। प्रथम युगको अन्तमा सौरन आफ्नो शैतानी मालिक मोर्गथ मेल्करको देवताहरू द्वारा हारबाट बचेर निस्किन्छ। दोस्रो युगमा सौरन संसारको बादशाह बन्ने सपना बुन्न लाग्छ। यसको लागि उ तोहफाहरूको मालिक अन्नतर ()को सुन्दर भेस बनाएर गन्धर्भहरू (elves) कहाँ गयो र उनको लोहारहरूको मुखिया केलेब्रिम्बोर (en:Celebrimbor) र दोस्रो लोहारहरूलाई धोका गरेर फुसलाएर उसबाट धेरै जादुई औंठिहरू बनाउन लगायो। तर रहस्यमयी र गुप्त तरिकाले उसले सुनको एक अर्को औंठी स्वयं बनायो : त्यो एक औंठी (The One Ring)। यसमा उसले संसारको सारा शैतानियत र जादुई तागत भरिदियो। त्यो एक औंठी बाकी सबै औंठिहरूको स्वामिनी थिइ, र त्यसलाई लगाउने वाला बकी सबै औंठी लगाउने वालाहरूलाई आफ्नो नोकर बनाउन सक्थयो। यो योजना नाकामयाब हुन्छ जब गन्धर्भहरूलेलाई यस धोकाको बारेमा थाहा पाउँछन् र तिनिहरू आफ्नो लागि बनाइएको तीन औंठिहरू खोल्छन्। सौरन गन्धर्भहरूले यो युद्ध गरेर बाकी सारा औंठिहरू फिर्ता लिन्छन्। सात औंठिहरू सौरनले फुच्चेहरूको नाइकेहरू लाई दिन्छन्, र नौवटा मान्छेकाको नाइके लाई। गन्धर्भहरूले आफ्ना तीन औंठिहरू बचाएर लुकाउँछन्। फुच्चेहरू आफ्नो आन्तरिक जादूको कारणले औंठिहरू सँग खास प्रभावित भएनन्, तर मान्छेहरू प्रभावित भए। औंठी लगाउने नौ मान्छेहरू केही नै वर्षहरूमा शैतानी प्रेत (en:Nazgul) बने, र अन्त सम्म सौरनको वफादार नौकर बनि रहे।
नूमेनोर (en:Numenor) द्वीपको राजा (मान्छे) आर-फराजौन (en:Ar-Pharazôn) मध्य धर्तीमा कब्जा गर्न आउछ र सौरोनलाई बन्दी बनाएर नूमेनोर लैजान्छ। उल्टै वहाँ सौरन राजालाई फुसलाएर उसलाई दुष्टताको बाटोमा लैजान्छ र नूमेनोर द्वीप र लगभग सबै नूमेनोरवासिहरूको सर्वनाश गर्दिन्छ। केही राम्रा नूमेनोरी मान्छेहरू मध्य भूमिमा बचेर पुग्छन् र त्यहाँ एक नयाँ सभ्यता बसाउँछन : गन्दोर (en:Gondor)को राज्य। यता अमर सौरन एक दोस्रो रूप लिएर पुन मध्य भूमिमा पुग्छ, बाकी नूमेनोरिहरूलाई मार्न। यस समय गन्धर्व र मान्छेहरू एक मैत्री सङ्गठन बनाउँछन र मिलेर सौरन र उसको दैत्यहरू (orcs)को सेनालाई हराइदिन्छन्। नूमेनोरिहरूको युवराज इसील्दूर एलेन्दिल (Isildur Elendil) आफ्नो मृत पिताको भाँचिएको तरवार नार्सिलले सौरनको औला काटेर उससंगबाट त्यो एक औंठी खोसेर लिन्छ र सौरनको शारीरिक शक्ति खतम हुन्छ। सौरनको प्रेतात्मा कहीं अन्तै भाग्छ। यस तरिकाले तेस्रो युगको शुरुवात हुन्छ।
अब नूमेनोरोको नयाँ राजा इसील्दूरको कर्त्तव्य बन्थयो कि त्यो एक औंठीलाई विनाशको पर्वत (en:Mount Doom or Orodruin), जुन एक ज्वालामुखी थियो,मा जलिरहेको आगोको ज्वालामा हालिदिनु, किन भनें त्यस दुष्ट औंठी र यसका स्वामीको सर्वनाशको कुनै अर्को तरीका थिएन। तर उसलाई आफ्नो एक जादुई चाहतको लागि एउटा औंठी राख्न मन लाग्छ, कुनै तरिका बाट आफ्नो स्वामी सौरनको नजीकै फिर्ता जाने लाई। त्यो जादुई औंठीको प्रभाव देखेर पनि इसील्दूरले उसलाई नष्ट गरेन तर आफ्नो नजीकै राख्यो। त्यस पछि केही दैत्यहरूले उसलाई मारे र उनको शव नदीमा फालिदिए। यस तरिकाले त्यो शैतानी औंठी पानीमा हरायो, एक पुरा युगको लागि। यो सारा कथा ज्यादातर द सिल्मैरिल्यन उपन्यासमा उल्लेख छ।
द हबिट उपन्यासमा एक मान्छे-जस्तो नस्लको वर्णन छ, जुन हबिट (en:Hobbit) भनिन्थ्यो। हबिट शान्तिप्रिय साना मान्छे हुन्थे, लगभग फुच्चेहरूको उचाइ जति। गोल्लुम (en:Gollum, जन्म : स्मीगोल Smeagol ) नामको एक बहिष्कृत हबिटको हातमा एक पल्ट त्यो एक औंठी पर्छ। गोल्लुमलाई त्यो शैतानी औंठीले एक पागल, भद्दा, र दुष्ट जनावर-नुमा जीवमा परिवर्तन गर्दिन्छ। एक हबिट बिल्बो बैगिन्स (en:Bilbo Baggins)को आफ्नो रोमांचक यात्राको समयमा कुनै तरिका बाट (धोखा गरेर) गोल्लुम देखि त्यो शैतानी औंठी उसलाई मिल्छ। बिल्बोको बुढेसकाल देखि द लर्ड अफ द रिङ्ग्स उपन्यासको कथा शुरू हुन्छ।
शैतानी औंठी[सम्पादन गर्ने]
त्यो शैतानी औंठी कुनै जरा वा अचेतन वस्तु थिएन, तर त्यसमा आफ्नै एक चाहत, एक इच्छा हुन्थयो। औंठी आफ्नो अल्पकालिक स्वामी आफै चुन्थ्यो, जसबाट कि त्यो आफ्नो सही मालिक सौरनको नजीकै फिर्ता पुग्न सकोस। यदि कसैले पनि त्यो औंठीलाई आफ्नो औलामा लगायो भने, त त्यो संसारको नजर देखि गायब हुन्थ्यो (तब सम्मको लागि, जब सम्म उसले औंठी लगाएको होस)। केही समय पछि सौरन प्रेतात्माको रूपमा फिर्ता मर्डोरको शैतानी मीनार बारद-दूरमा फिर्ता आयो। उसले एक विशाल आँखाको रूप लियो, जुन आगोले घेरीएको हुन्थ्यो र संधै त्यो औंठी खोजिरहन्थ्यो। यदि कुनै व्यक्तिले त्यो एक औंठी लगायो भने त यो खोज छिटो हुन्थ्यो र लगाउनेवालाको ठेगाना सौरनलाई केहि-केहि महसूस हुन थाल्थ्यो। यदि त्यो समय नजीकै कुनै नाज्गुल भएको भए उसलाई तुरन्त औंठी लगाउने वालाको ठेगाना थाहा हुन्थ्यो। औंठी लगाउने वाला पनि उ जस्तै कुनै दोस्रो धमिलो संसारमा पुग्थ्यो। त्यो व्यक्तिलाई धुन्धला देखिन थाल्थ्यो, तर सुन्नेको शक्ति बढ्न थाल्थ्यो। कहिले काँही यस्तो हालतमा सौरन र लगाउनेवालालाई एक दोस्रोको झलक पनि देखिन्थ्यो। अरु त अरु, औंठी वाहकलाई यस औंठीको लत लाग्न थाल्थ्यो र उसको यस औंठी प्रतिको एक अजीब बन्धन हुन्थ्यो।
त्यो औंठी शुद्ध सुनले बनेको थियो, र त्यसमा कुनै रत्न जोडिएको थिएन। त्यसको भित्रको विलयमा मर्डोरको शैतानी भाषामा लेखिएको थियो :
एश नज्ग दूर्बातूलूक, एश नज्ग गिम्बातूल, एश नज्ग थ्राकातूलूक अग बुर्जुम-ईशी क्रिम्पातुल।
एक औंठी , सबैमा शासन गर्नको लागि, एक औंठी , सबै चिज पाउनको लागि, एल औंठी सबैले लगाउनको लागि, र उनलाई अंध्यारोमा बाँध्नको लागि
उपन्यासको कथा[सम्पादन गर्ने]
पहिलो कडी : द लर्ड अफ द रिङ्ग्स--द फेलोशिप अफ द रिंग[सम्पादन गर्ने]
द लर्ड अफ द रिङ्ग्स--द फेलोशिप अफ द रिंग (The Lord of the Rings—The Fellowship of the Ring, यानि, औंठिहरूको मालिक--औंठीको मैत्री ) यस सिलसि लि गर्‍यो पहिलो कडी थियो। यस पूरै शृंखलाको नायक हो शायर नामको एक साना गाँउको एक हबिट फ्रोडो बैगिन्स (en:Frodo Baggins)। फ्रोडो बिल्बो बैगिन्सको भतीजा थियो।
नोट गर्नुहोस कि आफ्नो जीनियसको परिचय दिदै टोल्किनले न केवल एक पूरै पौराणिक गाथाको रचना गरे, बल्कि उनमा कम से कम दुई नयाँ क्रित्रिम भाषाहरू पनि बनाए : खास तरिकामा गन्धर्भहरूको शास्त्रीय भाषा क्वेन्या (en:Quenya) र उनको लोकभाषा सिन्दारिन (en:Sindarin)। दुवै भाषाहरूको धेरै शब्द र वाक्य पुरा उपन्यासमा अङ्ग्रेजीको बीच छितरिएको छ।
१. पहिलो अध्याय
जब बिल्बोले आफ्नो १११औं वर्षगाँठमा सन्यास लिने बारे सोंच्यो, त त्यो एक औंठी उनले फ्रोडोलाई बाकी सम्पति संगै पुर्ख्योलि सम्पतिको रूपमा दियो। त्यो समय धेरै जादूगरहरू (Wizards or Maiar) मध्ये एक वृद्ध जादूगर गैंडैल्फ (en:Gandalf, बिल्बोको साथि)लाई शंका भयो कि त्यो सुनको औंठी कहीं त्यो हराएको शैतानी औंठी त हैन। गैंडैल्फको शंका सही निस्कियो। त्यसै समय गोल्लुमबाट सौरनलाई खबर लाग्यो कि औंठी शायरमा छ। सौरनले तुरन्त नौ भयानक नाज्गुललाई शायर तिर रवाना गर्‍यो। यता गैंडैल्फले फ्रोडो र उसको साथी स्याम गैम्जी (en:Samwise Gamgee)लाई शायर देखि औंठी निकालेर रिवेन्डेल (en:Rivendell) पुर्यानको जिम्मेदारीमा दियो, जहाँ गन्धर्भहरूको एक कौमको राजा एलरन्ड (en:Elrond) रहन्थ्यो। बाटोमा फ्रोडो र स्यामलाई उनको नातेदार मेरियाडक ब्रैन्डीबक (en:Meriadoc Brandybuck, मेरी) र पेरेग्रिन टुक (en:Peregrin Took, पिप्पिन) पनि उनिसंगै हिडे। गैन्डैल्फ उनलाई नजीकैको शहरमा भेटेन, जस्तो कि उसले भनेको थियो। तर त्यहाँ फ्रोडोको बचे-खुचेका नूमेनोरिहरूको नाइके आरागर्न (en:Aragorn) भने भेटियो, जसले उसको धेरै मदद गर्‍यो। रिवेन्डेलको बाटोमा वेदरटप पहाडमा नाज्गुलले फ्रोडोमा हमला गरे र औंठी नदिए पछि नाज्गुल नाइके अङ्ग्मारको डायनराज (en:Witch-king of Angmar)ले फ्रोडोलाई एक विषालु जादुई तरवारले घाइते पार्‍यो। एक अन्य गन्धर्वको मददले फ्रोडो रिवेन्देल पुगयो जहाँ उनको उपचार भयो।
२. दोस्रो अध्याय
उता गैन्डैल्फ जादूगरहरूको सरदार सारुमान द ह्वाइट (en:Saruman the White) सँग औंठीको बारेमा सल्लाह लिन यसोनगार्डमा र्थैंक (en:Orthanc)को मीनारमा गयो। उसले आफ्नो भोलेपनमा सारुमानलाई सबै साँचो साँचो बताइदिए। तर सारुमानको मनमा शैतानियत अझ रातोच भर चुगरेको थियो। उनले गैन्डैफलाई मीनार माथि कैद गर्‍यो र दैत्योको एक आफ्नो सेना बनाउन लागयो -- उरुक हाइ , जसमा दिनको उज्यालोले पनि कुप्रभाव पर्थेन। गैन्डैफ र्थैंक देखि भागेर निस्कियो र रिवेन्डेल पुग्यो।
रिवेन्डेलमा एल्रन्डले एक परिषद आहूत गर्‍यो, जसमा मध्य धर्ती का सबै मुक्त नस्लहरू का प्रतिनिधि शामिल थिए। वहाँ फ्रोडोलाई शुरुवातमा यो फैसला सुनाइयो कि फ्रोडो औंठी वाहक बन्नेछ र यस एक औंठीलाई मर्डोर गएर मृत्युको पहाडमा लाभाको मुखमा फाल्नेछ, जसबाट औंठी र सौरन नेस्तानाबूद हुन। यिनी सबैको लागि औंठीको मैत्री बनाइयो, जसमा थिए : फ्रोडो, स्याम, मेरी, पिप्पिन, गैन्डैफ, आरागर्न, बोरोमीर (गोन्डोरको कार्यवाहक शासनाधिकारीको ठूलो छोरा), लेगोलास (गन्धर्व) र गिम्ली (फुच्चे)।
मैत्रीले कराध्रास (en:Caradhras) पर्वत शिखरको टाढा देखि मर्डोर तिर निस्किने कोशिश गरे, तर चनाखा कराध्रासले उनलाई बाटो दिएनन् (फिल्ममा यो हिस्सा सारुमानको काले जादूको कारण देखिएको थियो, जहाँ सारुमानले कराध्रासको जगाएको थियो)। मैत्रीको नजीकै र कुनै बाटो नभएको कारण उनलाई रास्ता बदलेर मोरियाको खानी (the mines of en:Moria) देखि जान पर्‍यो। त्यहाँ एक कालो अग्निदानव बालरोग (en:Balrog) सँग लड्दा गैन्डैफ खानको गहाराइमा खस्यो। त्यहाँ देखि यि मैत्री गए गन्धर्भहरूको एक दोस्रो शहरमा : लोथलोरियन (en:Lothlorien), जहाँ फ्रोडोले गन्धर्वरानी गालाद्रियल (en:Galadriel)को एनामा आफ्नो कठिन भविष्यको केही झलकहरू देख्यो। त्यसपछि महानदी अन्दुइनमा नाउहरूको माध्यमले यो मान्छे गोन्डोरको सीमामा चले गये। त्यहाँ सारुमानको उरुक-हाइयहरू सँग उनको एक भयानक युद्ध भयो जसमा बोरोमीर मारियो। फ्रोडोले आफै यो निर्णय गर्‍यो कि अब ऊ नै यस औंठीलाई मर्डोर सम्म लैजान सक्छ, र उसलाई यो बाटो एक्लै नै जान पर्नेछ। तर स्यामको मन्नतमा फ्रोडो र स्याम दुवै नै मर्डोर तिर हिंडे।
दोस्रो कडी : द लर्ड अफ द रिङ्ग्स--द टू टावर्स[सम्पादन गर्ने]
१. पहिलो अध्याय : ईसेनगार्डको गद्दारी
द लर्ड अफ द रिङ्ग्स--द टू टावर्स (The Lord of the Rings—The Two Towers, यानि, औंठिहरूको मालिक--दो मीनरें ) यस सिलसि लि गर्‍यो दोस्रो कडी छ। सिलसि लि गर्‍यो मध्य कडी भएको कारण देखि यसको कथा एकाएक नै शुरु हुन्छ, बिना कुनै चीजको जान-चिन्हारी दिये, अझ एकाएक नै खत्म पनि हुन्छ। यसको कथा सौरनको काली मीनार बाराद-दूर र सारूमान गर्‍यो काली मीनार और्थैंकको बीचको मैत्रीको ईद-गिर्द घूमती छ।
दैत्यों द्वारा पकडे गये दोनो हबिट मेरी र पिप्पिन सबै दैत्यहरूमा भए एक झडपको फाइदा उठाएर फैंगोर्न जंगलको भित्र भाग जान्छन्। वहाँ उनलाई इंसाननुमा रुख एन्ट पाइन्छन्। एन्ट रुखहरूको चरवाहे थिए र उनलाई यस कुराको धेरै रोष थियो कि सारुमान रुखहरूको काटएर आफ्नो भट्टियहरूको लागि इन्धनको बन्दोबस्त गरेर रहेको छ। मेरी र पिप्पिन एन्टोंको सरदार ट्रीबियर्ड र बाकी एन्टहरूलाई मना लिछन कि उनलाई पनि सारुमानको खिलाफ लडाईमा मदद करनी चाहिये। आरागर्न, गिम्ली बौना र गन्धर्व लेगोलास मेरी र पिप्पिनको खोज करते-करते रोहानको सल्तनतमा पुगछन, जहाँ रोहानको घुडसवार उनलाई बताछन कि उनहोंने पछिल्लो रात दैत्योंको एक समूहले युद्ध गरेको थियो अझ कुनैको पनि जिन्दा हैन बख्शा। तर आरागर्न मेरी र पिप्पिनको खोज जारी रखते भएका फैंगोर्न जंगलमा चले जान्छन्। वहाँ उनलाई एक जादूगर भेटिन्छ, जसलाई पहिले त त्यो मान्छे सारुमान समझते छन्, तर त्यस पछि उनलाई ज्ञान हुन्छ कि त्यो गैन्डैल्फ छ, जुन कि मोरियाको खदान देखि बालरोगको हराएर र फेरि पुनर्जीवित भएर वापिस आएको छ। वहाँ भन्दा चारै रोहानको सल्तनतको राजधानी तिर रवाना हुन्छन्। रोहानको आधा-पागल हो चुके राजा थेओडनको गैन्डैल्फ ठीक गर्दछ र उनको दुष्ट सलाहकार ग्रीमा केंचुआजबानको देश निकालयो दे दिइन्छ (ग्रीमा सारुमानको नजीकै शरण लिइन्छ)। गैन्डैल्फ थेओडनको सम्झिइन्छ कि उनको राज्यमा सारूमान गर्‍यो बुरी नजर लगी भए छ। उधर सारुमानले रोहानमा आफ्नो उरुक-हाइ सेना द्वारा चढाई गरेर दी। हेल्मको घाटीमा उरुक-हाइ र रोहानवासियोंको बीच भयानक युद्ध हुन्छ। उन समय गैन्डैल्फ एओमर गर्‍यो आदमियहरूलाई जम्मा गर्न पहाडिहरूमा चलाउछ। सुबह होते होते गैन्डैफ उन सबै आदमियों सँग वापिस आउछ, जुन दैत्यहरूलाई परास्त गरेर दिछन। भागते भएका दैत्य एक नयाँ वनमा शरण लिछन, जुन असलमा एन्टों द्वारा लाये गये हूओर्न (आधा-रुख, आधा एन्ट) थिए। वहाँ सबै दत्य हूओर्नद्वारा मारे जान्छन्। इसपछि बदला लिन थेओडन र अन्य मान्छे एक सेना लिएर र्थैंक जान्छन्।
और्थैंक को, मीनारको छोड, तबतक एन्टोंले आफ्नो कब्जेमाले लिएको थियो र पारको नदीको बान्ध तोडएर उसलाई जलमग्न गर्‍यो थियो। सारुमान गर्‍यो दुष्टता बरकरार रहनको कारण देखि गैन्डैल्फले उनको जादुई छडी तोड दी र उसलाई जादूगर श्रेणी देखि निकाल दिए। सारुमानले गलती देखि उन मान्छेको तरफ एक पालान्तीर दे मारा, जसलाई पिप्पिनले पकडा। जिज्ञासु हबिट पिप्पिनले जादुई पालान्तीरको उपयोग गर्दै उनमा चुपके देखि नजर गडाई। वहाँ उसलाई सौरन र उनको अगली चालको भनक मिली। इसपछि गैन्डैल्फ र पिप्पिन गोन्डोरको सल्तनत तिर रवाना हो गये।
२. दोस्रो अध्याय : मोर्डोर सम्मको सफर
फ्रोडो र स्याम मोर्डोरको बाटो कुहिरोको कारणले खोज्न सक्दैनन्। बाटोमा उनले गोल्लुम भेटछन्, जुन सारा बाटोमा उनिहरूको पीछ गरिरहेको थियो। औंठीको पछि पागल गोल्लुम उनीहरू सँग औंठी खोस्ने कोशिश गर्दछ, तर फ्रोडो र स्याम उसलाई पकडमा लिन्छन्। स्याम उसलाई मार्न थाल्छ, तर फ्रोडोले त्यस प्रति दया देखाएर उसलाई आफ्नो मार्गदर्शक बनाइदिन्छ, यस शर्तमा कि गोल्लुम उनलाई मोर्डोरको द्वार सम्म लैजाओस र औंठी खोस्ने कोशिश गर्नेछैन। केही समय सम्म यस्तो प्रतीत हुन्छ कि गोल्लुम साँच्चै नै उनको सच्चा साथी बन्यो। उता फ्रोडोको मन मस्तिष्कमा औंठी र त्यसलाई लगाउनेको चाहना भयानक रूपले भारी बढ्दै गइरहेको थियो। त्यो ति मान्छेको मोर्डोरको मुख्य फाटक (मोरान्नोनको काली घाटी) सम्म लिछ, तर उनको पहरेको पार गर्न सक्नु असम्भव जस्तै थियो। गोल्लुम फ्रोडोलाई भनन्छ कि त्यो उसलाई एक दोस्रो गुप्त बाटो बाट मोर्डोर भित्र लैजान सक्छ। यसमा त्यो तिनै किरीथ उंगोल ()को सीढिहरूको लागि मीनास मोर्गुल (अङ्ग्मारको डायनराजको किल्ला)को तर्फ हिड्छन्। इथीलियनमा उनलाई बोरोमीरको सानो भाइ फारामीरले समात्छ, तर फ्रोडोको उद्देश्य थाहा पाए पछि उसलाई छोडिदिन्छ। तर किरीथ उंगोल पुगेर गोल्लुम आफ्नो असलि शैतानियत देखाउँछ र उसले फ्रोडोलाई त्यहाँ गुफामा रहने वाला एक दानवाकार विशाल माकुरो शेलोब ()को जिम्मा लगाउँछ (औंठी चोर्न लाई)। शेलोबले फ्रोडोलाई आफ्नो विषले डँस्छ। स्यामले फ्रोडोलाई मरेको भन्ने ठानेर उसले औंठी लिन्छ र फ्रोडोको काम आफुले लिन्छ। त्यहाँ आएका केही दैत्यहरूले फ्रोडोको शरीर आफ्नो कब्जामा लिन्छन्, र त्यसै समय उनको कुराकानी बाट स्यामलाई थाहा हुन्छ कि फ्रोडो अझै जिउँदै छ।
तेस्रो कडी : द लर्ड अफ द रिङ्ग्स--द रिटर्न अफ द किंग[सम्पादन गर्ने]
द लर्ड अफ द रिङ्ग्स--द रिटर्न अफ द किंग (The Lord of the Rings—The Return of the King, यानि, औंठिहरूको मालिक--राजाको फिर्ती ) यस सिलसि लि गर्‍यो तेस्रो कडी छ।
१. पहिलो अध्याय : औंठीको लडाइ
गैन्डैल्फ र पिप्पिन पुगछन गोन्डोरको शासनाध्यक्ष डेनेथोरको दरबार मा, जहाँ गैन्डैल्फ डेनेथोरको सम्झिइन्छ कि सौरन उनपर तुरन्त युद्ध छेडने वाला छन्। गोन्डोरले रोहानसँग मदद पहिले देखि नै मांगी सकेको थियो। पिप्पिन डेनेथोरको चाकडिमा लाग्छ। रोहानमा आरागर्नको भाँचिएको नूमेनोरी तरवार नार्सिल गन्धर्भहरू द्वारा पुनर्निर्मित मिल जान्छ। आरागर्न, गिम्ली र लेगोलास एक पुराना अभिशापको आफ्नो पालोमा गर्नको लागि मृतकहरूको बाटोमा चले जान्छन्। वहाँ नूमेनोरियहरूको राजा-समान आरागर्न मृतक प्रेतात्माहरू देखि युद्धमा आफ्नो तर्फबाट लडनलाई भरोसा लिन्छ। सौरन, जस्तो कि अनुमान थियो, दैत्य सेना द्वारा गोन्डोरको राजधानी मीनास तिरिथमा चढाई गर्छ। डेनेथोर पागल हुन्छ र आत्महत्या गर्न थाल्छ। पेलेन्नोरको मैदानहरूमा गोन्डोर र रोहानको सेनाहरू र मोर्डोरको दैत्यहरूको बीच भयानक लडाइ हुन्छ। थेओडनको भांजी एओवेन (जो भेस बदलेर लडिरहेको थिइ) र पिप्पिनको हातबाट मोर्डोरको सिपहसलार अङ्ग्मारको डायनराजको स्वाहा हुन्छ। यसले र प्रेतात्माहरूलाई सेना आउने जाने देखि मीनास तिरिथ बच्छ। आरागर्नले एक योजना बनाउँछ कि यदि उनको बचेको सेना मोर्डोर गएर युद्ध करे, त शायद फ्रोडोलाई औंठी नष्ट गर्नलाई समय मिल्न सक्छ। आरागर्न आफ्नो सेना लिएर मोर्डोरमा मोरन्नोनको द्वार सम्म पुग्छ।
२. दोस्रो अध्याय : तेस्रो युगको अन्त
फ्रोडोलाई नाङ्गो गराएर र बाँधेर दैत्य कैद गराउँछन्, तर जाहिर छ कि उनलाई औंठी मिल्दैन। स्याम केही समय सम्म औंठी वाहक बनेर त्यो कैदखानामा पुग्छ, जहाँ उसको चलाखि देखि र दैत्यहरूको आफ्नो झगडालू प्रवृत्तिको कारणले लगभग सबै दैत्य आपसमा नै लडेर मर्छन। फ्रोडो औंठी फिर्ता लिएर स्यामसँग विनाशको ज्वालामुखी तिर निस्किन्छ। औंठीको शैतानी जादूले अबसम्म फ्रोडो र स्यामलाई लगभग बेहोश र अधमरा गर्‍यो थियो। उधर मोरान्नोनमा मानव र दैत्यहरूको बीच भीषण लडाइ चलि रहेको थियो। फ्रोडो जब कुनै तरिकाले लावा निस्किरहेको ज्वालामुखीको गुफामा पुगछन्, त औंठीको जादू उसपर हावी हुन्छ र फ्रोडो औंठी पहल लिइन्छ। यसले सौरनको तुरन्त औंठीको ठेगाना लागछ। तर त्यसै समय गोल्लुम गुफामा पुग्छ र औंठी खोस्नलाई फ्रोडोको पूरै औला नै दाँतले टोक्छ। औंठी पाएर गोल्लुम खुशी भएर उफ्रिन्छ र झुक्किएर तल आगोको लाभामा औंठी लिएर खस्छ। यस तरिकाले गोल्लुम र शैतानी औंठी दुवै नै लाभामा स्वाहा हुन्छन् र सौरनको बाँकी रहेका प्रेतात्मा समेत खत्म हुन्छन्। उसको दैत्य सेना पनि नष्ट हुन्छन्। फ्रोडो र स्यामलाई भीषण रूपले आगो निस्किरहेको ज्वालामुखी बाट विशाल गरुंड बचाएर ल्याउँछ।
गोन्डोरमा नयाँ राजा आरागर्नको ताजपोशी हुन्छ र चाँडैनै उनको प्रेमिका आर्वेनसँग विवाह पनि। तेस्रो युगको अन्त हुन्छ र मध्य धर्तीमा शान्ति र खुसियालि हुन्छ। होबिटहरू फर्किएर शायर आउँछन्, जहाँ उनलाई थाहा हुन्छ कि कुनै दुष्ट शार्की (जो खासगरि सारुमान हुन्छ) हबिटनमा कब्जा जमाएको हुन्छ। पिप्पिन र मेरीको नेतृत्वमा सारुमान र ग्रीमाको अन्त हुन्छ। शायरमा खुसियालि छाउँछ। तर फ्रोडोलाई अङ्ग्मारको डायनराज द्वारा दिइएको पुरानो जादुई घाउले वर्षौं सम्म तडपाइरहन्छ। यसैले फ्रोडो केही समय पछि बिल्बो, एल्रोन्ड, र गैन्डैल्फसँग समन्दर पार देवताहरूको भूमि वालिनोर चलाउछ।
परिशिष्टहरूमा धेरै नै राम्रो तरिका सँग धेरै चीजहरू दिइएका छन्, जस्तै :
राजाहरू र शासकहरूको काल
वर्षको दास्तान (पश्चिमी धर्तीको गाथा)
लेखन र अक्षरी
Spoiler चेतावनी समाप्त:कथानक र/या अन्त को विवरण खत्म भयो
विकिमिडिया कमन्समा The Lord of the Rings film trilogy सम्बन्धी अन्य सामग्रीहरू रहेका छन् ।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=द_लर्ड_अफ_द_रिङ्ग्स&oldid=663707" बाट निकालिएको
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक १३:३७, ४ अगस्त २०१८ मा परिवर्तन गरिएको थियो।